सियोनमा उक्लनु भएन र Auschwitz मा नष्ट भयो, Rebbe ले तिनीहरूलाई आरोहण नगर्न भन्यो। रब्बी माइकल अब्राहम
सियोनमा उक्लनु भएन र Auschwitz मा नष्ट भयो, Rebbe ले तिनीहरूलाई आरोहण नगर्न भन्यो।
प्रतिक्रिया > श्रेणी: विश्वास > सियोनमा उक्लनु भएन र Auschwitz मा नष्ट भयो, Rebbe ले तिनीहरूलाई आरोहण नगर्न भन्यो।
लाजले लज्जित भयो २ महिना अगाडि सोधेको
मेरो परिवार सियोन फर्कन सन्तुष्ट थियो। (वरिपरि अन्यजातिहरूको घृणा पछि, तिनीहरू अत्यन्त धनी थिए र कुनै कुराको अभाव थिएन)
रेबेले तिनीहरूलाई निर्वासनमा बस्न भन्यो र यो राम्रो हुनेछ वाचा गरे।
विश्वास गर्नुहोस् कि रिब्बे XNUMX औं Auschwitz मा सियोन र एफ्राइममा फर्किएनन् र तिनीहरूको सन्तानको रगत पनि प्रतिज्ञा गर्ने रिब्बबाट र तिनीहरूको प्रतिज्ञाको कारण नष्ट भयो।
तर यर्मिया XNUMX मा यसको विपरित झूटा अगमवक्ताहरूले सियोन र यर्मियालाई परमेश्वरको नाममा फर्कन प्रोत्साहन दिन्छन् भन्नुहुन्छ।
मात्र अर्को 70 वर्ष
र अब प्रवृत्ति उल्टो छ, बेबिलोनमा हामी सम्भवतः घरहरू निर्माण गर्नेछौं र महिलाहरूसँग विवाह गर्नेछौं। र यरूशलेमका मानिसहरूलाई मार्ने र भोकमरीको सामना गर्न।
त्यसोभए के सही छ?
सियोन फर्कने वा निर्वासनमा बसोबास गर्न यसको विपरीत?
mikyab कर्मचारी २ महिना अगाडि जवाफ दिनुभयो
यो कडा क्लच हो। सबै कुरा आफ्नै मा। एक रेब्बी जसले आफ्नो विचार आफ्नै कारणले नआउने भन्यो, पूर्णतया वैध कुरा भने। जुन अन्ततः गलत भयो त्यसले उसलाई नतिजामा बाध्य पार्दैन। कसैको हातमा रगत छैन। यदि उनले गैरजिम्मेवार वाचा गरे भने हुन सक्छ।
अगमवक्ताहरूको लागि, तिनीहरूले कुराहरू भविष्यसूचक जानकारी भन्छन्, त्यसैले त्यहाँ यो एकदम फरक छलफल छ। यदि तिनीहरूले केही वाचा गर्छन् भने त्यो परमप्रभुको नाममा हो।
सामान्यतया, आप्रवासन गर्ने कि भन्ने प्रश्नको जवाफ सधैं एउटै उत्तर हुँदैन। कहिले माथि जानु ठीक हुन्छ कहिले हुँदैन। यद्यपि त्यहाँ भूमि बसोबास गर्ने आज्ञा छ, तर एक अगमवक्ताले प्रलय वा घण्टामा टोराबाट कुनै पनि कुरा हटाउनुहुन्छ।
RAM र "टाकिया"
एक यहूदी मा परिवारको शुद्धताको जवाफ
त्यसैले यश अतिदमा उनको स्थान छ मा बेनेटको उदय र पतन र तिनीहरूको अर्थ (स्तम्भ 486)
mikyab मा स्वतन्त्र छनोटको जवाफ
येशिव विद्यार्थी मा स्वतन्त्र छनोटको जवाफ
mikyab मा Amaretz को प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस्